KAABASHKA LEH QAYBO PICKLED AH OO KARISKA DEGDEG AH: RAASHINKA DELICIOUS EE KHUDAARTA CALEENTA LA JARJAREY OO KHAL, KHUDAAR IYO ALAABOOYIN KALE, IN WEEL WEYN OO LOOGU TALAGALAY 3 LITIR - BEER CAGAARAN
Luqad luqadeed! Cuntooyinka asalka ah ee kaabajka macaan, karinta degdegga ah iyo kuwa caadiga ah, waxay ku daboolan yihiin qaybo
Maxaa miiska xafladaha, laakiin aan lahayn cunto fudud oo dhadhan fiican leh? Maanta miiskeena waxaa jiri doona midab leh, dhadhan fiican leh, caafimaad lehna, oo muhiim u ah wakhtiyada casriga ah, cunto fudud oo miisaankeedu yahay: kaabajka lakabka leh ee la jarjaray! Ma aha oo kaliya kaabajka cad, laakiin sidoo kale casaan iyo xitaa aan tayo lahayn ku haboon tahay sida marinating.
Lama yaabin cunnooyinka la yiraahdo aduunka, ama fudud: dad. Midabka khaaska ah ee saxanka ayaa siinaya habka jarida: jeexista. Laga soo bilaabo kaabash this ka badan oo udgoon, kalluunka, casiir leh. Tixgeli sida ay ugu qanacsan tahay maqaalkayaga.
Noocyada kala qaybsan qaybo waaweyn
Digniin: Muuqaalka ugu muhiimsan ee la karinayo ee marinating kaabajka kuuskuubka waa hab lagu jarayo madaxa kaabajka. Madaxda biilkan qiimaha iibka cufan. Habka lagu gooyo kaabajka wuxuu ku jiraa qaybo badan ama laba geesood oo leh dhinac ugu yaraan 3 cm.Haddii aad raacdo taladan fudud, kaabashku wuxuu ahaan doonaa mid xitaa ka dib markaad ku shubayso marinade kulul.
Karootada iyo xididdo, haddii khudradani ay ku jiraan cuntooyinka, waxaa kale oo badanaa la goosan karaa oo la jarjarayaa tuubooyinka ama cirbadaha. Haddii uu toonta ku jiro xayawaanka, waxaa la geliyaa toonta oo dhan ama jar jartey. Mararka qaarkood kaabajka ayaa la kariyaa iyada oo la raacayo basbaas qafiif ah.. Madaarka waxaa lagu gooyaa gudaha siddooyinka ama straws. Baasaboor Bulgaar - gooyaa qoqobka cawska ama si tartiib tartiib ah.
Faa'iidada iyo qandhada la raaco
Waxaa haboon in la xuso faa'iidada iyo qasaarada ah ee lagu karsado kaabajka lafdhabarta ee xaleefyada. Kaabashka caleenta, oo ka duwan fermented, waxaa lagu kariyey si deg deg ah, laakiin kaliya laba saacadood ayaa la qaadaa! Si ka duwan liereejkraut, habka halsano taas oo ah mid aad u awood leh, pickled waa kuwa ugu jecel ee guryaha da 'yarta.
Xaqiiqdii waa hubaal in xitaa jilicsan ee jikada ay la qabsan karaan diyaarinta kaabajka pickled. Khasaarada kali ah ee kaliya ayaa ah joogitaanka qaniinyada cuntada.
Soo iibso khal tayo wanaagsan. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa canabka. Kharashka, dabcan, ka sarreeya qiimaha tufaax caadi ah. A dhalo oo geed isbonji ah 0.25 l - oo ku saabsan 55 RUB. Laakiin khaldani waxay bixisaa dhadhan, maqaayad gaar ah iyo jilicsanaanta.
Haddii aanad ka helin wax soo saarka miiska dukaanka, ka dibna khaladka caadiga ah wuu qaban doonaa. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la ilaaliyo qiyaasta sida ku qoran qajaarka, ka dibna cuntada fudud ee kushiinka waxay noqon doontaa mid cusub oo dhadhan fiican leh bilooyin badan ka dib diyaarinta!
Dhammaan faa'iidooyinka muuqda, waxay ku qasban yihiin in ay ka digaan kuwa ku xanuunsanaya jirradoodu inay ku dhacdo cudurrada caloosha. Suufiyada dhadhanku si fiican u kala soocaan miiska, laakiin dadka qaba acidity hooseeya ee casiir gastric ah, waxay, hoogaa, yihiin contraindicated, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato tan. Haddii aad qabtid xanuunka faafa, cudurka kelyaha, ama uu xasaasiyad ku yeesho alaabtan, waxa fiican inaad iska joojiso inaad cuntid cayayaankaas.
Doorashada khudradda: caddaan, midab ama casaan ah?
Doorashada Kaabashka waa furaha guusha ee cunto fudud oo dhadhan fiican leh miiska xafladaha. Inta badan waxaa loo isticmaalaa siinta cadaan iyo casaan. Laakiin dadka jacaylka jilciya lama tirtiri doono midkood: waxaad u qaadan kartaa cunto karinta.
Kaabashka cad - Bakhaarada fitamiinada. Waxay ka kooban tahay A, C, PP, B iyo naadir U. Waa fitamiin U kaas oo ka dhigaya bogsashada kaabajka cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka, boogaha bogsashada iyo nabaad-guurka. Khudraddaas waxaa ku jira asiidhyada loo yaqaan 'organic acids', sidoo kale:
Kuwa ku jira cunto, war-weyn: nalalka calorie ee kaabajka lafdhabarta 100 gram waa 56 kcal oo keliya. Haddii aad cunayso 100 garaam oo cunaayo, waxaad heli doontaa 0.93 gram oo borotiinka, 3.7 garaam oo baruur, iyo 4.5 garaam oo karbohidraat ah. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaloorida, faa'iidooyinka iyo khatarta kaabajka lakala qaado ayaa laga heli karaa qodobkan.
Kaabashka cas sidoo kale u fiican marinade. By iyo ballaadhan, muuqaalka, waxay ka duwan tahay midab cad oo midabkiisu yahay: madaxa waa midab madow. Xaaladdani waxay sahlan tahay in la sharraxo: waxaa jira suuf gaar ah - flavonoid anthocyanin.
Maaddadu waa antioxidant xoog leh, waxay ka ilaalisaa unugyada ka timaadda burburinta, waxay kor u qaadeysaa qashinka sunta. Faa'iidada ugu weyn ee Kaabashadan: iyada oo gargaaridiisa, waxaad awood u yeelan kartaa cadaadiska.
Xaqiiqdu waxay tahay in isticmaalka joogtada ah ee kaabashan uu caawiyo dib u soo celinta xididdada dhiigga. Faa'iidada kale ee kaabajka cas ayaa ah in ay tahay vitamin C badan, dhab ahaan laba jeer, iyo carotene - sida ugu badan 4!
Gawsoorka sidoo kale wuxuu leeyahay mudnaantiisa. Qodobbada ugu weyn ee tayo fiican: oo ka kooban 2 jeer oo ka mid ah walxaha borotiinka oo ka badan cad, iyo fitamiin C - saddex jeer ka badan.
Sida laga soo qaatay gaduudka cas iyo lowska, waxaa laga yaabaa inay tahay kan kaliya: qiimaha. Kharashka ku yaal dukaamada dukaanka ayaa ka sarreeya tan cad cad.
Waa maxay fasalka qaadashada?
Su'aalku maaha mid aan shaqeynin. Ku habboon kaydinta muddada dheer ee cusub, waa in la googooyaa gogo 'picking waa in aan la qaadin. Way adagtahay oo maahan dhammaan tayada leh!
Noocyo Kaabashka Caddaan ah oo ku haboon soo-qaadashada:
Noocyada kaabajka cas ee ku haboon ee pickling:
Ku saabsan F1.
Noocyo tayo leh oo ku habboon oo loo yaqaan pickling:
Sidee loo kariyaa habka caadiga ah ee karootiga?
Sidaa daraadeed, waxaan sii wadi doonaa. Tirada maaddooyinka waxay noqon kartaa wax kasta, laakiin waa muhiim in la ixtiraamo qiyaasta!
awood u leh 3 litir;
Karootada 2 pcs.
Saraq - 1 pc.
Baag caleen 4 pcs.
Koriander - 1 tsp.
Saliida qorraxda - 0.5 litir.
Biyaha - 1 l.
Salt - 2 qaado.
Sonkor - 3 qaado.
Sisin 9% - 6 qaado.
Si aad u nadiifiso madaxa kaabajka caleemaha cirridka, ku dhaq, ka jar jarjar, maxaa yeelay waxay ka sii dari kartaa dhadhanka cuntada fudud. Diyaargaroobey sidan oo loo googooyey qeybo yaryar - sida aad rabto, qiyaastii 3 cm waliba, waxay ku xiran tahay gacmahaaga.
Karootada si taxaddar leh u dhaq. Ka dib markii hababka biyaha, gooyaan wareegyo khafiif ah ama halbeegyo wareeg ah.
Si tartiib ah ugu walwal gacmahaaga khudaarta jarjaran ee saxanka leh toonta la jarjaray, caleen caleemo iyo geedo midab leh. Dhar googo'an. Waxaan ku ridnaa weel dhar hore loo diyaariyey. Waxaan si adag u xidhnaa. Waxaan ku soo bixinnay qaab sidan oo kale ah in boos yar oo weli taagan yahay.
Marinade. Karkari dheriga litir oo biyo ah. Ku dar sonkorta, saliidda cuntada iyo milixda si aad u karkariso biyaha. Iska ilaali kala dirista sonkorta iyo milixda. Kari saddex daqiiqo. Saddex daqiiqo ka dib, ku shub khal. Kudar daqiiqo dheeraad ah. Ka qaad kuleylka. Aan dhawrno daqiiqado.
Hadda, oo ku saabsan sida, dhab ahaantii, qajaar la dhanaanin: ku shub kulul (laakiin aan karkarin!) Marinade ee weel ubax ah.
Guddi: Si aad uga hortagto dheriga marinada kulul ee ka soo baxaya, ku rid miis la geynayo. Trick yar yar ayaa kaa badbaadin doona bangigaaga dillaac.
Marinade waa in lagu shubaa sidan oo kale si aad uga baxdo qiyaastii laba sentimitir qoorta qoorta. Ku dabool daboolka nalka.
Ka dib markii Kaabashka uu istaagay ilaa saacad, waxay qaboobi doontaa. Waxaan ku nadiifinaa qaboojiyaha oo ka tagnaa habeenkii.
Horeba subaxdii la kariyay ee kaabajka ah, cuntadeena dadkuna waxay ku xiran tahay cuntooyinka caadiga ah waxay diyaar u yihiin. Markaad guriga ku daaweyneysid, kaabajka kale ayaa dib loogu celin karaa qaboojiyaha ama meel qabow ah. Muddada dheer, istaandarka!
Cunto dhaqso ah, oo khal
Dugsi kastaa waa qasab. Martidu waxay u imaanayaan casho, mana jirto wax fudud oo ku habboon! Waxa la sameeyo Markaas kariyo Kaabashka leh la karinayo "Provencal"! Raashin, macaan iyo dhadhan aad u dhadhan fiican leh!
Kaabashka: 2 kg.
Carrot 1 pc ballaaran.
Garlic - 3-4 oo toon ah.
Sonkor - 0.5 koob.
Basbaaska madow 5 digir.
Dhismahan hoose - 1/4 tsp.
Carnation - 3-4 waxyaabo.
Saliid saytuun ah 4 qaado.
Sisin 9% 110 ml.
Diyaarso Kaabashka sida ku jirta qariidada caadiga ah. Next, gooyaa Kaabashka galay xaleef. Aynu qaadano. Karisaa karootada on hayso ugu weyn ama jarjar xaleef dhuuban. Sallaji jarjar ama iibso saxaafadda.
Isku dar khudaarta, ku dar milix, sonkor, subag iyo dhir udgoon.
Waxaan ku ridnaa digsi dhaldhalaalka, iyo, kor, waxaan dul saarnaa dulmiga! Waxaad tusaale ahaan ku dhejin kartaa weel biyo ah.
Dheriga ku dhaji meel qabow. Dhowr saacadood ka dib, macaamiilku wuxuu siin doonaa casiir fiican oo diyaar u ah! Gudbinta miiska waxay ku jiri kartaa qaboojiska.
Cunto dheeraad ah oo loogu talagalay kaabajka degdegga ah ee la isku qurxiyo ayaa laga heli karaa halkan.
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan kaabashka kudarka ee qaybaha degdega ah:
Sidee kale ayaad u karin kartaa?
Iyada oo ku saleysan labadan cuntada, waxaad sameyn kartaa kala duwanaansho kala duwan oo cunto fudud ah.
Wareegyada kaabajka ah ayaa la samayn karaa si aad u fiiqan. Si tan loo sameeyo, waxaad ku dari kartaa marinade ee dhirta kulul inay dhadhamaan, tusaale ahaan, basbaaska yar yar, ama xilliga firileyda dabacasaha Korean. Waxaan ku qornay hababkayaga wax u karinta kaabajka lakabka ah ee la jarjaray oo leh madow ama casaan basbaaseed ee maqaalkeenna.
Qeybo waaweyn oo leh xididdo
Haddii aad marineysid xididdo, ka dibna, raac miiska cuntada caadiga ah, ku dar xididdo kaabajka iyo karootada. 1 kg oo ah kaabajka 1 dabacasaha iyo 1 miro yar yar ayaa loo baahan yahay. Beetjegyada jarjaraya. Marinade sida saxda ah ee qandhada caadiga ah. Waxaa la yaab leh, kaabash sida dukaanka kharashka badan dhowr jeer ka badan ee version classic!
Waxaan kugula talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan kaabajka picking leh xaleef beetroot:
Haddii aad go'aansatid inaad marto iyo martiqaadka tafaariiqda guriga, xusuusnow qodob muhiim ah: ka hor inta aanad qaadin tufaaxa, biyo karkariyo digsi, milix iyo karkariyo karkarin 5 daqiiqo. Marka xigta, raac talada caadiga ah.
Waxaan ku talineynaa daawashada fiidiyowga ku saabsan qashin-qubka oo la jeexjeexay:
Hot Pepper iyo Garlic
Kaabashka la kariyey ee leh basbaas alwaax wuxuu u eegi doonaa gaar ahaan xaflad. Waxaa muhiim ah in la xasuusto saamiga: 1 kg oo ah kaabajka waxaad u baahan tahay 200-250 g, oo ku habboon basbaaska salaax. Iska yaree jarjar oo ku dar kiriimka iyo dabacasaha. Marka xigta, raac talada caadiga ah.
Qaar ka mid ah sida jecel maraqa kaabajka. Xaaladdan, adoo raacaya qariidada caadiga ah, waa inaad ku darto saddexda, 5 qaado oo sonkor ah.
U adeegidda cunto fudud waa mid aad u fudud. Ku rid saliidaha basasha jarjar yar ee saxan oo leh cunto fudud. Basasha qooyay qajaar la isku qurxiyo iyo waxay noqon doontaa dheere weyn oo saxanka ah! Waxaad sidoo kale isku dayi kartaa doorashadan: ku shub saliid ama saliid gabbaldayaha, ku dar basasha cagaaran. Waxay u muuqataa mid cusub oo xarrago leh.
Kawaarjooga quruxda badan wuxuu u adeegaa astaamaha. Isku day in aad ka samaysato kaabajka lakabka ah ee kuxiran!
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa inaad ku ogaato raashinka lagu kariyo karinta kaabajka ah:
oo leh beetroot.
Kaabashka caleenta ah waa cunto fudud oo adduunka ah, taas oo aan ka xishoonaynin in miiska la dhigo, miisaaniyaddana qoyska ma burburin doono! Laakiin sidee! Iyadoo ay iyadu - iyo abaarta qaranka, in naoshenski!